Saacadaha Timaha Waqtiga Leh: Iibso Qalabka Waxyaabaha Badbaadinta ee Remy
qiimeeyay 4.70 out of 5
qiimeeyay 4.60 out of 5
Qulqulo toosan oo isku dhafan
qiimeeyay 4.74 out of 5
qiimeeyay 4.69 out of 5
qiimeeyay 4.79 out of 5
qiimeeyay 4.63 out of 5
qiimeeyay 4.80 out of 5
Qulqulka lafdhabarka ah
VIRGIN BADBAADINTA DHACDOOYINKA DHALINYARADA
Halkan waxaan ku sii dheerahay HIAr Extensions, waxaan ku faani karnaa alaabtayada. Kordhinteena waxaa la abuuray oo loogu talagalay haweenka midabka leh ee haweenka midabka leh! Tartankayagu wuxuu ka dhigan yahay bikradda Remy Expy. Walaasha macnaheedu waa timuhu waa ka madax bannaan kiimikada adag, Remy micnaheedu waa timo jilicsan ayaa la jaanqaada isla jihada si loo yareeyo arrimaha la xiriira qoditaanka. Waxaan leenahay ballaarin aan u hello walaashayada oo dhan. Shirkadeena waxaa laga yaabaa in lagu magacaabo "My Extensions Hair Extensions" laakiin waxaan leenahay kordhinta laybareeriga naga furan!
Qadka fidinta dabiiciga ah wuxuu ka kooban yahay Curly, Kinky Curly, Coily, iyo sidoo kale Afro Kinky! Waan hubaa inaad ka heli karto isku-dhejintaada qumman. Laynka Fidinta Qalabka toosan wuxuu ka kooban yahay Perm Yaki, Coarse Yaki, iyo Kinky Straight Collection. Dhamaan xidhmadeenu waxay leeyihiin xiritaan isku xidhan. Dhaqaalaha ayaa si dhakhso ah loogu soo bandhigi doonaa mustaqbalka dhow. Xirmooyinka noocan ah waa tayo sare 100% timo bikrad ah oo bikrad ah.
Haddii aad tan akhrisid, markaa waxaad ku jirtaa wadada saxda ah si aad u hesho qaabka ballaarinta ee ugu fiican oo aanad si caadi ah isugu afgaran timahaaga laakiin kor u qaadida timaha. Ballaarinta saxda ah ee saxda ah ayaa lagu dabaqay si ay u caawiso timahaaga koraya oo abuuraya qaabab ilaalineed oo cajiib ah. Iska ilaali inaad fasax ka baxdo oo aad iskudaydid inaad isku dhejisid ballanqaadyada kale ee Brazil ee Remy virgin. Kobcin timahaaga dabiiciga ah, ha ka badalin!